“केही त बोल ! तिम्रो मौनताले साह्रै पीडा दिन्छ मलाई !” “तिम्रो मौनताले नराम्रोसँग चिथोरिएकी छु म । यो मौनता कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन मलाई । केही त बोल । प्लिज..”
‘प्रतिक्रिया’ को प्रतीक्षामा इनबक्समा केन्द्रित उसको नजर ‘नो पार्किङ’ मा रोकिएको सेतो माइक्रोसँगै चोरऔँला देखाएर उभिएको ट्राफिकको फोटोमा अडियो । तर न फोटोमा खास आकर्षण थियो, न त स्ट्याटस नै उति मन छुने । यात्राको क्रममा यस्ता दृश्य र घटना कैयौँ देखेकी छ उसले तर आज उसका औँला मानेनन् कर्सर सार्न । अडिइरह्यो फेसबुकको वाल । हेरिरही त्यो तस्बिरसहितको स्ट्याटस— ‘जति सिटी बजाए पनि...’ पटक पटक पढी उसले । माइक्रो बस सबै उस्तै हुन् । ट्राफिकको कामै त्यही तर सिटी ??? सिटीसँग उसको प्रेम जोडिएको छ सायद ! सिटीसँग उसको स्वाभिमान पनि जोडिएको छ । सिटीसँग उसको आत्मविश्वास जोडिएको छ । सिटीबाट अभूतपूर्व अनुभूति बटुलेकी थिई उसले..... अनि त्यही सिटी, जसले उसलाई जीवन्त पीडा दिएको छ । चोट पु¥याएको छ ।
“केटाले केटी जिस्क्याउन हुने, केटीले केटा जिस्क्याउन नहुने ? मलाई जिस्क्याउँदाको आनन्द महसुस गर्न मन लाग्यो । त्यही अनुभव बटुल्ने मनको चाह ल्याएँ प्रयोगमा । बस् ! ....यसमा यतिविघ्न गम्भीर हुनुपर्ने कुरै के छ र !” उन्मत्त मुस्कानका रेखा कोरिए अनुहारभरि । “परम्परादेखि चल्दै आएको रीति, संस्कार, पद्धति परिवर्तन गर्न सक्छेस् ?” मैले अनुशासनको घेराभित्र ल्याउने चेष्टा गरेँ । “तर सिटी बजाएर केटा जिस्क्याउनचाहिँ सक्दिरहेछु । बुझिस् ? डेमो त देखिस् नि । हँ ?” ओठ बङ्ग्याएर दुवै परेली तन्काई उसले ।
“ओई, के गरेको ? खुस्किस् ? के भन्छन् यार अरूले ? हद भयो यो त ।” हातै समातेर तानेँ मैले उसलाई । “वर्षौंदेखि केटाहरूले हामीलाई यस्तै गर्दै आए, अहिले पनि गरिरहेछन् । केटीले गर्दा हद ? अब जिस्क्याउने पालो हाम्रो । यतिन्जेल हाम्रा दिदीहरू, आन्टीहरू, आमाहरू आपूmलाई ‘मर्द’ भन्नेहरूका हरेक हर्कतमा मौन बसे । अब मौनता साध्न बाध्य हुने पालो यिनीहरुको । घाँस, दाउरा जाँदा बिनासित्ति सुसेल्ने, स्कुल जाने बेला बाटो ढुकेरै ‘मास्टर्नी’ भन्ने अनि कुटानी, पिसानी जाँदा जिस्क्याएको बिर्सिस् तैँले ? अलिकति राम्रो बनेर कतै निस्कन लाग्यो ‘....काले काले मुखडे पे.... गाएर सिटी मार्ने । तिनले मात्रै बजाउने सिटी ? तर हामीले बजाउन खोज्दा तँ आफैँ मलाई केटीको क्षेत्राधिकारमाथि सीमा कोर्छेस् ?” सम्पूर्णतामा बदला लिने मनस्थितिमा मैदानमै उत्रिएकी थिई ऊ ।
“कति केटाले कति केटीलाई जिस्क्याए । कतिले घाँसको डोकोसहित कान्लामुनि लडाए । कतिले सुसेले अनि कतिले.... । उफ् ! मुखियाबाले कहिलेकाहीँ यसबारे बहस चलाए ? तर सबै मौन बसे । आजसम्म पनि उनीहरुको मौनता तोडिएको छैन ।” प्रतिशोधको लडाइँ फाल्गुनी एक्लैले गर्नुपर्ने थियो र ? मैले नबुझेको कुरा । अनेक असन्तुष्टि फलाकिरही उसले । फाल्गुनी सामान्य केटीभन्दा भिन्न थिई । उसका हरेक क्रियाकलाप भिन्न थिए । सरले पढाइरहेका बेला भन्थी— “रुखको चरालाई गुलेली हानेर भुइँमा झारे जस्तै बोर्डमा लेख्तै गरेको बेला ठ्याक्कै हातैमा लाग्ने गरी गुलेली हान्यो भने के गर्छ होला है यो सरले ?”
यस्ता उटपट्याङ त कति आउँथे कति उसलाई— साथीहरूलाई पुच्छर लाइदिने, प्रेम दिवसमा साथीहरुदेखि सर, म्याडमलाई समेत फेक नाममा रोज र ग्रिटिङ कार्ड पठाउने । अनि त्यसबाट आउने प्रतिक्रियाबाट आनन्द लिने । गजब थियो उसको आनन्द लिने तरिका । ती सबैमा उसको आत्मविश्वास देख्दा म आफैँ दङ्ग पर्थें । फाल्गुनीलाई एक्सक्युज दिएपछि विज्ञान अस्वाभाविक रूपमा हिरो बन्दै गयो कलेजमा । उसको शालीनता, भद्रता र नरम मिजासबाट प्रभावित नहुने सायदै थिए कोही । म त उसको फ्यानै थिएँ । फाल्गुनी भने धेरै दिन आक्रोशित भइरही । विज्ञानले एक दिन क्यान्टिनमा फाल्गुनीसँग निकै लामो कुरा ग¥यो । सायद फाल्गुनीलाई फकाउने कोशिसमा थियो कि ! अन्ततः आक्रोश र प्रतिशोधबीच उसका अगाडिका अभियानमा सहकार्य गर्न आइपुग्योे विज्ञान । साँच्चै फाल्गुनीको सिटी सफलता थियो वा सक्षमताको विजय ?
‘प्रतिशोध र जवानीको खहरेले कुनै मोडमा उसलाई नदुखाओस् ।’ सिर्पm कामना मात्र गर्न सक्थेँ म उसका लागि ।
“ठीक छ, धोका दिएको होइन, तिमी हा¥यौ मसँग । त्यसै जबर्जस्ती टाढियौ मलाई रुवाएर ।” “मैले अब हरेक पीडा र अप्ठ्यारा एक्लै सामना गर्नुपर्नेछ । त्यही पीडा र चोटले आपूmलाई थप मजबुत बनाउनेछु । अब मैले त्यही स्वरूपमा आपूmलाई बदल्नुपर्छ । म फुट्नुहुन्न, टुट्नुहुन्न र पग्लिनुहुन्न । जो, जुन स्वरूपमा ममा ठोक्किन आउँछ । समय, परिवेश, अवस्था र व्यक्ति...., स्वयं ऊ टुक्रिनेछ । म चट्टान हुनुपर्छ ।” अविरल बगेका आँसु पुछ्तै दृढ सङ्कल्प गरी फाल्गुनीले ।
हाँस्दै जोडले सिटी बजाई दुवै औँला ओठले बेस्सरी च्यापेर, जसरी कफी सपअगाडि केटाहरूको हुललाई जिस्क्याउँदा बज(ाउँथी । अनि उही शैलीमा देब्रे आँखा झिम्क्याई ।